XOG+WARBIXIN: Maxaa ka soo baxay Wada hadalo mudo 7aad ah dhexmarayay W/Waxbarashada Puntland & DF Soomaaliya?
MUQDISHO(P-TIMES) – Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Waxbarashada ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan, ayna xubno ka yihiin Wasiiru dowlaha Cabdillaahi Xasan Rooble, Agaasimaha Wasaaradda Maxamed Cali Faarax iyo Madaxa Imtixaanaadka Puntland Axmed Max’uud Warsame ayaa tagay Muqdisho, si ay wada xaajood ugula yeeshaan dawladda Soomaaliya arrimaha ku aadan helitaanka Shahaadada rasmiga ah ee Ardayda Puntland ay u baahan yihiin, si ay u aadaan Jaamacaddaha dibada iyo kuwa gudaha ee dalkaba.
Maalmihii ugu horeeyeyba wada hadalo gaar ah ayaa dhexmaray wafdiga Puntland iyo madaxda Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo uu hogaaminayo Wasiirka Waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre, waxay ka wada-hadleen arrimihii horey u dhacay iyo sidii looga gudbi lahaa khilaafka, heshiisna loo gaari lahaa.
Wada hadalo oo maalmo badan qaatay guddi farsamo oo ay dhinacyadu u saareen, waxay ku soo heshiiyeen qodobo ku saleysan arrimihii ay isku hayeen oo ay ka mid ahaayeen in Puntland aysan horey u galin Imtixaankii Dawladda Soomaaliya.
Sidaas oo kale is afgarad ayay ka gaareen labada dhinacba dhammaan arrimihii laysku hayey, sidda aan ku helnay xogtana waxaa lagu heshiiyey qodobo ay ka mid ahaayeen.
In guddi ka kooban 7 xubnood ahna labada dhinac ee Puntland iyo dawladda Soomaaliya la sameeyo, kuwaas oo hadda kadib ka shaqeyn doona Imtixaanka Shahaadiga ah sidii wadajir loogu gali lahaa oo ay Ardayda Puntland u gali lahaayeen sannadka dambe Imtixaanka federaalka.
In hadda Ardaydii kasoo baxday Imtixaankii dhawaa oo khilaaf sababay ay helaan Shahaadooda oo laga soo gudbo khilaafkii hore, Ardayduna ay hadda waajib u helaan Shahaadada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Maalmo kooban ka dib, Is afgaradka ay guddigii gaarka ahaa ay gaareen ayay u gudbiyeen Madaxda wasaaraddaha Puntland iyo Federaalka, waxaana labada dhinacba ay isla qaateen arrimaha guddiga farsamadu ay soo gudbiyeen oo ay ku heshiiyeen, waxaana Wasiirka Waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ay wehliyaan kuxigeenkiisa iyo Wasiiru dowluhu ay isku raaceen fulinta qodobada heshiiska.
Maalmo kooban, ka dib wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo la doonayey in uu saxiixo heshiiska ayaa si lama filaan ah u diiday qodobadii ay dhinacyadu ku heshiiyeen, isagoo sheegay in aysan Ardayda Puntland heli doonin wax Shahaado ah, haddii aysan galin Imtixaankii Shahaadiga ahaa.
Mr, Goodax Barre oo ay la xariirtay PuntlandTimes wuu ka gaabsaday in uu arrimahan ka hadlo, isagoo noogu soo koobay in ay wada hadal kula jiraan Puntland, kaas oo uu diiday in uu faahfaahin ka bixiyo.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax iyo Agaasimaha Qeybta Imtixaanaadka Puntland Axmed Saahid ayaa dib ugu laabtay Puntland todobaad ka hor,waxaase wali kusugan magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda iyo Wasiiru dowlaha wasaaradda Waxbarashada Puntland.
Xildhibaano iyo Senatoro katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doorto Puntland ayaa wada hadda dadaalo kuwajahan sidii xal looga gaari lahaa arrimahan, balse wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa ku adkeysanaya in ay Ardaydu xaq u leeyihiin in ay galaan Imtixaankii Shahaadiga ahaa, waxaana taasi diidan Puntland.
Wasiirka Waxbarashada Puntland iyo Wasiiru dowlaha ayaa kusugan Muqdisho, waxay wali rajo ka qabaan in xal la gaaro oo la fuliyo is afgaradkii ay horey u gaaren, waxaana isha lagu hayaa sida ay wax noqdaan oo ay dad badan eegayaan.
Bisha September ayay ahayd in ay Ardaydu aadaan Jaamacaddihii ay ka heleen Deeqaha waxbarashada intii heshay, balse ma haystaan Shahaado ay ku tagaan, sidda ay noo sheegeen qaar kamid ah Ehelada Ardayda qaarkood oo magacyadooda ka gaabsaday.
Talaabadan waxaa mid waji gabax ku ah Madaxda sare ee dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaana muuqata in ay dhabaha u horseedayso in ay mustaqbal la’aan noqdaan Boqolaal Arday oo ka baxay dugsiyada Waxbarashada ee Puntland, gaar ahaana kuwa Dugsiyada Sare oo aadi lahaa Waxbarashada Jaamacaddaha.
Xukuumadda Puntland, wali kama aysan hadlin kulamada ka socda Muqdisho, sidaas oo kale Ardayda wax cad looma sheegin in ay heli doonaan ama waayi doonaan, waxaana lafilayaa in ay maalmaha soo socda arrimahan ka hadlaan dhanka Wasaaradda Waxbarashada ee Puntland.
LA SOCO WIXII WAR AH MAREEGTA PUNTLANDTIMES, KANA DHIGO WEHELKAAGA
Waa munaafaq cunsuriya, waa in aduunka lala xiriiraa, sidii afaf kale wax loogu baran lahaa, mar hadii aan waxbarashada loo sineyn, mid dowladaha aduunka ah ka codsada in af lagu barto, kana goosta iyaga, mar hadii waxbarasho la diidey.